Al-shabaab oo uga digay Jabuuti in aanay ciidan u soo dirin Somaliya. – Radio Daljir
Al-shabaab oo uga digay Jabuuti in aanay ciidan u soo dirin Somaliya.
Muqdisho, Sept 19 – Sh. Cali Maxamuud Raage oo u hadlay ururka Al-shabaab ayaa uga digay dawlada Jabuuti in ay ciidan u soo dirto Somaliya, uguna baaqay dagaalyahanada Islaamiyiintu in ay ka qayb galaan dagaalada Somaliya.
Sh. Raage waxaa uu sheegay in hadii Jabuuti ay iska dhegatirto digniinta, ciidamada Jabuuti loola dhaqmi doono sida kuwa AMISOM ka jooga Muqdisho.
Digniintan ayaa timi maalmo kadib dalab ka soo baxay Midawga Afrika oo sheegay in ciidamo siyaado ah oo xoojiya kuwa AMISOM la geeyo Somaliya. 5,000 oo askari, kana kala yimi dalalka Uganda & Burundi ayaa ku sugan Muqdisho.
2 maalmood ka hor ayaa Al-shabaab ay weeraro is-miidaamis ah ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin madaarka Muqdisho, ayna dileen saraakiil sare oo ka tirsan taliska AMISOM.
Dawlada Jabuuti ayaa wax jawaab ah ka bixin digniinta Al-shabaab.
Taliye ku xigeenka ciidanka AMISOM oo dhintay; 11 kale oo ku dhimatay 2-dii qarax ee is-miidaamiska ahaa.
Muqdisho, Sept 17 – 2-dii qarax ee is-miidaamiska ahaa ee maanta duhurkii lala beegsaday fariisinta ugu weyn ee ciidanka AMISOM ee madaarka Muqdisho ayaa sababay dhimashada 11 qof oo uu ku jiro taliye ku xigeenka ciidanka AMISOM.
Gen. Juvenal Niyonguruza oo u dhashay Brundi ayaa la xaqiijiyey in uu ka mid yahay dadka dhintay. Gen. Nathan Mugisha oo isna u dhashay Ugandan ayaa ku dhaawacmay qaraxyada.
Waxaa sidoo kale dhaawacyo kala duwani soo gaareen 30-meeyo kale oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo dad rayad ah oo ka ag dhawaa halka qaraxyadu ka dhaceen.
Afhayeen u hadlay Al-shabaab ayaa sheegay in Al-shabaab ay ka damabasay qaraxyada, ayna jawaab u yihiin dilkii maalmo ka hor ee Saalax Nabhaan oo u dhintay sawaariikh ay diyaaradaha dagaalka ee Maraykanku ku weerareen kolonyo gawaari ah oo uu la socday meel ku dhaw Baraawe.
Warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale sheegay in taliyayaal ka tirsan ciidanka Daraawiishta iyo kuwa Qalabka-Sida ee Somaliya ay ku dhinteen qaraxyada, halka kuwa kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen.
Taliyaha ciidanka Daraawiishta, Goobaale, taliyaha ciidanka Qalabka-Sida Gen. Dhuunmaal ayaa la sheegay in ay dhinteen.
Taliyaha ciidanka bilayska Gen. Cabdi Cawaale Qaybdiid ayaa la sheegay in uu isna ka mid yahay saraakiisha dhaawaca ah.
Waa qaraxii ugu khasaaraha badnaa ee lagu weeraray ciidanka AMISOM sannadkan.
Waxaa Muqdisho ku sugan 5,000 oo ah ciidanka AMISOM ee ilaaliya fadhiyada madaxda dawlada federaalka ah ee Somaliya, iyo goobo cayiman oo ay ka mid yihiin madaarka & dekeda Muqdisho.
2 qarax oo is-miidaamis ah oo lala beegsaday fariisinka ciidanka AMISOM ee madaarka Muqdisho.
Muqdisho, Sept 17 – Gawaari la sheegay in ay ku hilaayeen walxaha qarxa, ayna saaraayeen naftihurayaal la tuhunsan yahay in ay ahaayeen Al-shabaab ayaa isku shubay fariisin ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin madaarka Adam Cadde ee Muqdisho.
Labada qarax ayaa mid lala beegsaday taliska ciidanka AMISOM, halka kan kalena saldhig isla ciidanka AMISOM.
Qaraxyada ayaa sababay in gebi ahaanba ay joogsadaan hawlihii shaqo iyo duulimaadyada madaarka Adam Cadde.
Gawaarida loo adeegsaday qaraxyada ayaa la sheegay in ay wateen calaamada Qamada Midoobay.
Lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxyada, walow la tuhunsan yahay in ay sababaeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Al-shabaab ayaa sheegtay qaraxyada, lana malaynayaa in ay jawaab u yihiin hanjabaado aargoosi ah oo la xiriirta dilkii Saalax Nabhaan oo dhawr maalmood ka hor ay dileen diyaaradaha dagaalka ee Maraykanku.
Waxaa kale oo ay sheegeen in bartilmaameedku uu ahaa shir u socday saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo kuwa dawlada Somaliya.
Dawlada Somaliya kama aanay hadal qaraxyada is-miidaamiska ah ee lala beegsaday madaarka Adam Cadde ee Muqdisho.